NgoFebruwari 2020-Funda ukuRhweba
Inyanga: February 2020
IJapan 225 (JP225USD) Kwintshukumo yeBarish, Ukudibana nokuThengiswa okukhulu
Ukuhlaziywa: 28 Februwari 2020
Iindawo eziManyeneyo eziPhambili23200, 23600, 24000
IJapan 225 (JP225USD) yexesha elide iTrend: Bearish
Isalathiso saseJapan sama-225 sasikwisiqendu saphezulu ukusukela nge-Agasti ka-2019. Iinkunzi kungoku nje zijamelene nokuchasana namawaka angama-20000. Nangona kunjalo, emva kwemizamo emithathu engaphumelelanga, i-bearish kathathu ephezulu yenziwa.
I-bearish kathathu ephezulu yimodeli yokubuyela umva ejongene nokuhla kwesalathiso. Ixabiso lihle kumgangatho ophantsi wama-20728. Nangona kunjalo, iJapan engama-225 iwele kummandla ogqithileyo. Ixabiso linokubamba ngaphezulu kwe-20000 yenkxaso. Okwangoku, inkxaso lixabiso lembali apho amaxabiso adityanisiwe ngaphambi kokunyuka.
Ukuhamba ezantsi kwesalathiso kukhokelele ekubeni i-JP225USD ibe kummandla ogqithileyo. Iimarike ziwele ngaphantsi kwe-20% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Oku kuthetha ukuba iJapan 225 ikwimeko eqinileyo ye-bearish. Nangona kunjalo, xa abathengi bevela isalathiso siya kuba kumandla okuqhubela phambili.
Jaipani 225 (JP225USD) yeXesha eliPhakathi leNdlela: Ukuthwala
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathiso besisecaleni ukusuka ngo-Novemba 2019 ngaphambi kokwehla kwexabiso. Phambi kokonakala, i-JP225USD ibiguquguquka phakathi kwe-22880 kunye ne-24000. Ngomhla we-19 kuFebruwari, iinkunzi zeenkomo ziye zenyuka zaya phezulu kodwa ukuxhathisa kubangela ukuba isalathiso siyekelele kwinkxaso yangoku.
Imakethi okwangoku ikwinqanaba lama-21 le-Index ye-Relative Strength period 14. Isalathiso kungenzeka ukuba siwe njengoko singaphantsi komgangatho osembindini wama-50. Ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zithambekele ngokuthe tye. Eyona nto iphambili kukuba abathengi baya kuvela kwindawo ethe kratya ukutyhala ingqekembe phezulu.
IJapan 225 ingene ezantsi kwetshathi. Okwangoku, isalathiso sikwindawo ethe kratya yentengiso. Abathengi kulindeleke kummandla ogqithileyo ukuba batyhale ixabiso phezulu. Nangona kunjalo, isalathiso sinokuhlala kummandla ogqithileyo ukuba abathengi bayasilela ukuvela.
Isixhobo: Japan 225 (JP225USD)
Ixabiso lokungena: 20400
tags Japan 225, JP225USD, Uhlalutyo lwamaxabiso
Isalathiso seShanghai SE sokudityaniswa kwesixokelelwano (i-SHCOMP) sihla senyuka kulungiselelo lokuphuka okanye ukophuka
Indawo yoKhuselo engundoqoImigangatho:
Imimandla yenkxaso ephambili2700, 2600, 2500
I-Shanghai SE Composite Index ikwindlela esecaleni ngoFebruwari 2019. NgoJanuwari isalathiso sasisekuphakameni. I-SHCOMP inyuke ukusuka kumazantsi e-2464 ukuya kuma-3219 aphezulu kwaye yagqithisa kakhulu. Abathengisi bangena balityhalela ezantsi ixabiso. Isiphumo sokuwa sikhokelele kwicala elihamba ngoFebruwari. NgoFebruwari, imarike iyatshintsha phakathi kwe-2800 kunye ne-3100. Nangona kunjalo, akukho bhere okanye iinkunzi zeenkomo ziye zaphula amanqanaba abo aphambili.
I-SHCOMP-Itshathi yemihla ngemihla
Okwangoku, i-SHCOMP okwangoku ikwi-bearish umfutho njengoko imakethi iwela kuluhlu lwamaxabiso asezantsi. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye ne-50-yosuku lwe-SMA zijike ngokuthe tyaba zibonisa ukuhamba ecaleni.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathiso sisecaleni. Imakethi iyatshintsha phakathi kwe-2800 kunye ne-3100. Ixabiso kwixesha elisezantsi liyatshintsha kuluhlu oluqinileyo. Iinkunzi zenkomo zazama uluhlu lwamaxabiso aphezulu ngaphambi kokuwela kuluhlu.
Isalathiso okwangoku sikwinqanaba lama-34 le-Index ye-Relative Strength period 14. Isalathiso kungenzeka ukuba siwe njengoko singaphantsi komgangatho osembindini wama-50.
I-Shanghai SE Index edibeneyo ibonakala izinzile ngoFebruwari. Isalathiso sijongana nokuchasana nge-3100 okanye iya kuwa xa igqityiwe. Abahwebi kufuneka bathengise amanqanaba aphambili kuba isalathiso sihamba ecaleni. Imakethi iyehla kwaye ngenxa yoko kulindelwe iodolo.
Isixhobo: IShanghai SE Composite Index (SHCOMP)
Ixabiso lokungena: 2800
tags Uhlalutyo lwamaxabiso, I-SHCOMP
Igcisa laMazwe ngaMazwe iAkon yokuSungula i-Cryptocurrency "Akoin" kwiStellar Blockchain Network
Umculi orekhodayo wamazwe aphesheya u-Akon uthathe isigqibo sokwakha i-Akoin cryptocurrency ikhosistim yendalo esekwe kwiStellar blockchain.
Umququzeleli kunye nomongameli u-Akoin uJohn Karas bathi bathathe isigqibo sokumisela iprojekthi kwiStellar kuba babelana ngamaxabiso afanayo.
Ukuphehlelelwa ngokusesikweni kwale mali yedijithali- ibizwa ngokuba yiAkoin- kubonisa inyathelo elilandelayo kumnqweno womthengisi wehlabathi wezobugcisa ukunceda ukuvula amandla apheleleyo oqoqosho lwaseAfrika ngokusebenzisa iteknoloji ye-blockchain.
"U-Akoin ukhethe i-Stellar isasaza i-hybrid blockchain ngenxa yombono wayo ekwabelwana ngawo wokudibanisa ukuhlanganiswa kwezemali kwihlabathi liphela, ngakumbi kwiindawo ezinjenge-Afrika," ucacisile kwingxelo ye-28 kaFebruwari.
Inzame ka-Akon yoLuntu kunye noPhanthropy wamkela iTekhnoloji yeBlockchain
U-Akon kudala waba ligorha eliqaqambileyo kwezoluntu kunye nothando, ethatha inxaxheba kumanyathelo amaninzi aphumeleleyo ajolise ekuqinisekiseni ukuzinza kunye nokulingana kwimimandla esaphuhlayo, enkosi kwilinge layo le-Africa Lighting, nelibonelela ngezisombululo zamandla elanga kumazwe ali-18 ase-Afrika.
Inxalenye yenjongo yeStellar kukunceda iibhanki ngaphandle kweenkonzo zebhanki, kwaye ummeli weAkoin wagxininisa ukuba iStellar sele isebenza namashishini eAfrika kwaye inokunceda kwiiDapps ezicwangcisiweyo kunye nemicroans.
Ithokheni yenkonzo ye-Akoin iya kuhambelana nezipaji zeStellar kwaye iyahambelana nazo zonke iiasethi zedijithali kunye neemali ezichaziweyo ezixhaswe yinethiwekhi yeStellar.
Abasebenzisi baya kuba nakho ukutshintsha kwangoko ukusuka kwenye imali baye kwenye, kwaye uKaras ubize into ephambili kwisakhono sothungelwano lwe-stellar ukukhuthaza "ukuhanjiswa okufanelekileyo kwexabiso phakathi kweeasethi."
Kuyanceda ukufezekisa enye yeenjongo zeprojekthi ezichaziweyo ekufuneka ziqhubeke nokuphucula ixabiso lemizuzu ehlawulelwa kwangaphambili. Imizuzu yemali yedijithali kumazwe aliqela aseAfrika, njengeNigeria, isetyenziswa ngenxa yexabiso lentengo kunye neengxaki zebhanki. Iqonga le-Akoin livumela abasebenzisi ukuba bathengise i-fiat okanye ezinye i-cryptocurrensets zemizuzu.
I-Akoin Cryptocurrency ayisiyiStablecoin
Isithethi sixele amaxabiso atshintshayo wethokheni ye-Akoin. "I-Akoin ayisiyiyo iStablecoin, kodwa siza kunika ukufikelela kwezinye izinto ezinikezela ngeStotcoin," utshilo. Iqonga libandakanya isipaji semali esineemali ezininzi kunye nentengiso eshukumayo yabasebenzisi "yokufunda, ukufumana, ukuchitha kunye nokonga.
Ngoku uyakholelwa ukuba ngoncedo lwe-cryptocurrency kunye ne-blockchain technology, anganceda ekuvuseleleni amandla ezoqoqosho amakhulu kwaye ubukhulu becala e-Afrika, evumela amashishini kunye noosomashishini bommandla ukuba bashiye uphawu kwihlabathi.
Ngokubhekisele kwindlela i-Stellar blockchain network enokunceda ngayo u-Akoin ukuba afezekise le njongo, uJohn Karas, umseki-mbambisene, kunye nomongameli we-Akoin bachaze ukuba iStellar hybrid blockchain edityaniswe nombono opheleleyo wokwenza indibaniselwano yezezimali kwihlabathi jikelele yenza ukuba olu khetho lubonakale.
tags iAfrika, Idikheyidi kwi-Akoin Cryptocurrency, Akon, Ukwamkelwa kweDijithali yemali, Inkwenkwezi yeBellChain
I-EURJPY yeXesha elisezantsi leXesha eliPhucukileyo liqiniswe ngolwesiHlanu ngelixa liQhekeza phantsi kweNqanaba elidlulileyo le-199.99
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURJPY-Februwari 28
Ukongeza kwi-hysteria ejikeleze i-COVID-19, i-EURJPY ixinezelekile ukusuka kuthengiso olongezelelekileyo lwe-JPY-phakathi kokunyuka kweemfuno zehlabathi zokufumana indawo ekhuselekileyo. Ngokuchasene nale meko, i-horizon yexesha elikufutshane akufuneki ikhuphe ngaphandle kwengingqi ye-2020 esezantsi kwinqanaba le-118.46.
Amanqanaba okumelana: 122.87, 121.47, 199.99
Amanqanaba enkxaso: 118.46, 117.08, 115.83
Umkhwa uhlala u-bearish ekuhambeni kwexesha njengoko umnqamlezo uhlala kakuhle ngaphakathi kwejelo eliwayo elenziwe ukusuka kwinqanaba le-122.87 (eliphezulu).
Ixabiso liye lagatywa kwinqanaba le-120.67 ngommandla wokumelana ngokuthe tye okusondeleyo ngelixa ikhefu le-115.83 linokwandisa imeko esezantsi ukusuka kwinqanaba le-122.87 (eliphezulu) ukuya kwinqanaba elilandelayo lenkxaso ye-115.83.
Okwangoku, i-intraday bias kwi-EURJPY ihlala ingathathi cala. Kwicala elisezantsi, inqanaba lenkxaso le-118.46 linokufikelelwa ngaphantsi kwenqanaba le-118.87. Nangona kunjalo, kunokubakho ikhefu eliqinileyo kunye nenqanaba le-122.87 yomgangatho ongezantsi wokuqhubeka nokwehla konke.
Kwicala elingasentla, ngaphezulu kwenqanaba le-121.47 linokubuyisa umsebenzi we-bullish kwikota ekufuphi kwaye endaweni yoko ujolise ekubuyiseleni kwinqanaba eliphezulu le-122.87.
Ixabiso lokungena: 118.87
I-Bitcoin (BTC) iFluctuates Ngaphezu kwe-8,500 yeedola njengeeNkxaso-mali zoThengiso
Iindawo eziKhuselekileyo: $ 10,000, i-$ 11,000, i-$ 12,000
Imimandla yenkxaso ephambili: $ 7, 000, $ 6, 000, $ 5,000
I-BTC / i-USD yexesha elide: Ukuthwala
Okumangalisa kukuba, ukunyuka okuye kwafikelela kwinqanaba eliphambili njengoko iBitcoin isondela kwinkxaso elandelayo kwi-8,400 yeedola. Ekuhambeni kwayo ezantsi, ixabiso lehla laya kuthi ga kwi-8,500 yeedola kwaye yenza ukutsalwa ukubuyisela inqanaba lamaxabiso angama- $ 9,000. Emva kokuphinda uphumelele, i-BTC iphinde yaqala phantsi njengendlela yokuxhasa i-8,400 8,400 yeedola. Kwicala elisezantsi, ukuba i-BTC iwela kwi-8,200 XNUMX yeedola esezantsi, ke kuya kufuneka sicinge ngenkxaso elandelayo kwi-XNUMX yeedola. Nangona kunjalo, ukuhla okuthe gca kungafikelela kwisivumelwano ngokukhawuleza njengoko izikhombisi zibonisa amanqanaba ohlukeneyo ezikhundla ezigqithisileyo.
BTC / USD - Itshati yemihla ngemihla
Ngokuqinisekileyo, iBitcoin iwele ngaphantsi kwe-20% yoluhlu lwe-stochastic. Oku kuthetha ukuba uxinzelelo lokuthengisa lweBitcoin ligqithile. Ikwathetha ukuba intengiso ifikelele kummandla ogqithileyo. Kwindawo ethe kratya, amandla e-bearish omelele. Kummandla, abathengi benzelwa ukutyhala iB Bitcoin phezulu. Ixabiso liphulwe ngaphantsi kwe-21-day SMA kunye ne-50-day SMA ebonisa ukuba i-downtrend iqale kwakhona.
I-BTC / i-USD yeXesha eliPhakathi leNdlela: Ukuthwala
Kwitshathi yeeyure ezi-4, imarike yehle yaya kuthi ga kwi-8,505, 10,000 yeedola. Ukusuka ekuchaseni kwe- $ 8,750, intengiso yehle yaya kuthi ga kwi-8,750 yeedola. Ixabiso libuyele umva kwakhona kodwa liyaqhubeka nokuhla. I $ XNUMX yinqanaba lexabiso lembali apho imarike idityanisiwe ngaphambi kokuhla.
I-BTC / i-USD - itshati ye-4
I-Bitcoin ithengisa kwinqanaba le-22 ye-Relative Strength Index period 14. Imarike ngoku ingummandla ogqithisileyo we-RSI. Abathengisi abayi kubakho ukutyhala i-BTC ezantsi. Kunoko, abathengi baya kuba bekho ukuba batyhale iBitcoin phezulu.
I-Bitcoin ithengise kwaye yawela kwindawo ethe kratya kwintengiso. I-stochastic kunye ne-Index ye-Relative Strength ibonakalise ukuba i-BTC ikummandla ogqithileyo. I-Bitcoin okwangoku igqithiselwe kwi- $ 8,551. Abathengi kulindeleke ukuba bavele. I-Bitcoin iya kunyuka isezantsi ye- $ 8,551 ukuba abathengi bayavela.
Ixabiso lokungena: $ 8,642
Yeka: $ 8,300
Ithagethi: $ 9,500
tags Bitcoin, BTC / USD, Uhlalutyo lwamaxabiso
I-S & P 500 yeengozi ezingalindelekanga iqala kwakhona ukuhla kwayo, ukuhla ukuya kwi-2020 entsha
Uhlalutyo lwexabiso le-S & P 500-Februwari 28
I-S & P 500 ine-pullback enzulu phantsi kweMigangatho yokuHamba ngokuLula (ii-SMAs) ngelixa ithengisa uxinzelelo kwi-3100 kumanqanaba asezantsi ezantsi ngo-2020. Ukusasazeka kweCoronavirus kwenza abatyali mali boyike ukukhula kwehlabathi. Ukuhlala ngokuqhubekayo phantsi kwenqanaba elichaziweyo kunokunyusa ukuthengisa okuthe kratya ukuya kwinqanaba lama-2800.
Amanqanaba okumelana: 3400, 3220, 3000
Inqanaba lenkxaso: 2853, 2772, 2600
I-S & P 500 yexesha elide iTrend: Bearish
I-S & P 500 ifumene esinye isibetho kwiseshoni edlulileyo: isithuba sexabiso sokuvula siyehla phantsi kwenkxaso ebalulekileyo kwinqanaba le-3000.00, kwaye ngoku sele ingene kwinqanaba lesibini lokuthengisa kwiseshoni yanamhlanje kwinqanaba elilandelayo lenkxaso kwi-2853.00, okwangoku kuthengiswa kufutshane nenqanaba lama-2950.00.
Okwangoku, isalathiso siyarhweba kwinqanaba le-2947.00, emva kokuzama ukuvala umsantsa wexabiso usilele wawa ngaphambi kokubuyela kwinqanaba le-3000.00. Sinokubona ukuzama ukuhlala kwinqanaba elidlulileyo le-2900.00, nangona kunjalo, ukuba oku kuyasilela, inkxaso emibini elandelayo iqikelelwa kumanqanaba angama-2853.00 nakuma-2772.9.
I-S & P 500 ifumana ulungiso olusezantsi kwaye ngoku icela umngeni kumyinge wayo ohambayo we-5, izama ukuphinda ibuye okoko iibhere zaphuka ngaphantsi kwamanqanaba angama-3000, ukufikelela kumgangatho omtsha ngo-2020.
Ukusasazeka kweCoronavirus kubangela ukuba abathengisi boyike. Ukunqongophala kokunyuka okuphezulu kwe-S & P 500 kungakhokelela ekuthengiseni ngakumbi ngokuhla ukuya kwinqanaba lama-2853.00.
Ixabiso lokungena: 3000
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin-Iithagethi zeBitcoin iVeki eNtsha yeVeki ephantsi emva kokuPhulukana noBuxoki
• I-Bitcoin kutsha nje ibone ukubuyiswa kancinci kodwa yehluleka ukugqitha kwi-9000 yeedola
• Ukulungiswa kwexesha elifutshane kwe-bearish kuhlala kusebenza ngelixa iBitcoin idibanisa
Ngaphezulu kweeyure ezingama-24 ezidlulileyo, yonke imakethi ye-crypto ibone ukubuyiswa okuncinci kodwa ngoku kubuyela kwimowudi ye-bearish. Nangona iBitcoin izinzile malunga ne- $ 8800; Ukulandela ukubuyisa okubukhali ukusuka kwi- $ 8600. Ngelixa uzama ukubuyisa i-9000 yeedola izolo, i-Bitcoin iyaliwe kwaye ngoku ithengisa malunga ne- $ 8700 ngalo mzuzu njengoko abathengisi bebonisa umdla ngakumbi.
Amanqanaba aphambili okumelana: $ 8800, $ 8900, $ 9000
Amanqanaba enkxaso ephambili: $ 8600, $ 8500, $ 8400
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin (BTC): Yonke imihla-Ukuthwala
Izolo, i-Bitcoin ichukumise i-8600 yeedola ngentambo ende emva kokubona ukwehla kweeveki ezimbini. Ukugxotha le nto iphantsi evekini ekhankanyiweyo, iBitcoin iphinde yafumana kufutshane ne- $ 9000 ngaphambi kokuvala malunga ne- $ 8800 nge-doji ekhulayo.
I-BTCUSD, itshathi yemihla ngemihla-Feb 28
I-Bitcoin ijongene nenkxaso ye- $ 8600 kwakhona. Ukuba le nkxaso iyasilela ukubamba, amaxabiso ehla kwindawo yenkxaso ephambili ye- $ 8400- ephawulwe eluhlaza kwitshathi yemihla ngemihla. Ukuba i-BTC iyayihlonipha le ndawo yokufunwa kunye nomgca ohamba ngokuluhlaza okwesibhakabhaka, ngokukhawuleza ngokukhawuleza kufuneka kuthumele ixabiso kwi-10000 yokumelana ngokukhawuleza. Okwangoku, eyona nkcaso ikufutshane yeBitcoin yi- $ 9000
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin (BTC): Itshathi ye-4H-Bearish
Kwiiyure ezi-4, iBitcoin ibisembindini wokudityaniswa kwezi yure zidlulileyo. Ngelixa ukunganyangeki kwe- $ 9000 kungqina kunzima ukuba iinkunzi zoyise ngaphezulu, i-8600 yeedola iye yaqhubeka nokucinezela isenzo se-bearish okwethutyana ngoku.
Itshati ye-BTCUSD, 4H-Feb 28
Nangona kunjalo, inokuqhekeka ukuba imeko yangoku ye-bearish iyaqina. Ukujonga oku, i $ 8500 kunye ne- $ 8400 exhasa inokuphononongwa. Kwimeko apho iinkunzi zenkomo zibonisa umdla onamandla, iBitcoin isenokwenzeka ukuba iphinde ibuyele kumzuzu ukuya kuma- $ 8900 kunye ne- $ 9000 yokuxhathisa ngaphambi kokubonisa ulwalathiso oluthe kratya. Nangona kunjalo, indlela yokuziphatha ye-BTC iseyi-bearish ngalo mzuzu.
Thengisa: $ 8620
I-TP: $ 8500
tags uhlalutyo, BTCUSD, Ixabiso leNtshukumo, Itshathi yamaxabiso
I-Bitcoin Cash Resumes Uptrend njengabathengi batyhola amaxabiso ngaphezulu kwenqanaba lokuphumla kwi- $ 360
Ukuhlaziywa: 27 Februwari 2020
Amanqanaba okuGxila aphambili: $ 275, $ 300, $ 350
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 200, $ 160, $ 120
I-BCH / iXabiso leXabiso leXesha elide leXesha: Ukukhupha
Ukusukela nge-15 kaFebruwari, i-BCH ibihleli iye ezantsi. Ingqekembe yehle i $ 301 ephantsi kwenqanaba lokuphumla le- $ 360. Kule nkxaso yangoku, i-BCH iwele kwindawo ethe kratya kwintengiso. Njengokuba abathengi kusenokwenzeka ukuba bavele, intshukumo ezantsi inokubambeka okwethutyana. Kwicala elingasentla, i-BCH inokufikelela kwi-400 yeedola ephezulu okanye kwi-440 yeedola, ukuba inkxaso yangoku kwi- $ 320 ibambe. Akunakulindeleka ukuba intshukumo esezantsi iqhubeke okwangoku njengoko abathengi kunokwenzeka ukuba bavele.
I-Bitcoin Cash ingaphantsi kwe-20% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Oku kuthetha ukuba i-BCH ikummandla ogqithisileyo wentengiso. Akukho bathengisi ukuba batyhalele ezantsi imali njengoko ukuthengisa kugqithisile. Silindele ubukho babathengi bokutyhala ingqekembe phezulu. Ikwathetha ukuba i-BCH ikwi-bearish enamandla.
I-BCH / USD Umndilili wexesha eliphakathi: Ukukhupha
Kwitshathi yeeyure ezi-4, ingqekembe yehla kwisitishi esihlayo. Yawa phantsi kwe- $ 320 ephantsi eyakhokelela ekubeni ingqekembe yehle kummandla othengisiweyo. Kwicala elingaphezulu, abathengi kunokwenzeka ukuba bavele batyhalele ingqekembe phezulu.
I-Bitcoin Cash iwele kumgangatho wama-41 we-Index of Strength Index. Ingqekembe ibikade ingummandla ogqithileyo apho abathengi bevela khona ukutyhala ingqekembe phezulu. I-RSI iphinda inyuke iye kwinqanaba lama-41 lisondela kwindawo ephezulu.
Imbonakalo Jikelele ye-Bitcoin Cash (BCH)
I-Bitcoin Cash ibonakala ngathi iyigqibile i-bearish run okwangoku. Njengoko abathengi bevela kummandla ogqithileyo, ukunyuka kwe-BCH ukuya phezulu kuqinisekisiwe. Abarhwebi kufuneka baqalise ii-odolo ezinde ngolindelo lwendlela yokuqhubela phambili.
Uphawu lweRhwebo lweBitcoin Cash
Isixhobo: BCH / USD
Ixabiso lokungena: $ 323
Yeka: $ 280
tags BCH / USD, I-Bitcoin Cash BCH, Uhlalutyo lwamaxabiso
I-Action Star uSteven Seagal ogqitywe yi-US ngokunyusa ngokungekho mthethweni kwe-ICO kwi-2018
Ngokunyusa ngokungekho mthethweni umnikelo wokuqala wengqekembe (ICO) owenziwa ngoFebruwari 2018 yiBitCoiin2Gen (B2G).
I-Seagal khange ikwazi ukunika ingxelo eyi-250 yezigidi zeerandi ezinkozo, kunye ne-tok750,000 ye-B2G eyongezelelweyo eyi- $ XNUMX kutshintshiselwano lokunyusa i-ICO, ngokwengxelo ekhutshwe yi-SEC.
Ukunyuselwa kwakhe kubandakanya "ukuphoswa" yiBitcoinn2Gen ye-ICO kunye "neZen Master uSteven Seagal uye waba ngummeli wohlobo lweBitcoiin2Gen." Ukunyuselwa kwakhe kubandakanya abalandeli bakhe beendaba zentlalo.
Ulwazi lwe-SEC olukhutshwe ngomnye umaphephandaba lucaphula iSeagal isithi "ngentliziyo iphela" ixhasa umnikelo wokuqala wengqekembe. Ukunyuselwa kweza emva, kwi-2017, i-SEC yalumkisa ukuba ii-crypto-asethi ezithengiswa nge-ICO zinokuba kukukhuseleka, kwaye emva kokuba icebise ukuba abantu abadumileyo okanye abanye abantu abakhuthaza i-crypto-asethi ekhuselekileyo kufuneka "baveze indalo, ubungakanani, kunye nenani lembuyekezo" bayamkela ngenxa yoko.
U-Kristina Littman, i-CEO ye-IC yeCandelo lokuQinisekiswa kweCyber ​​Unit, ucatshulwe esithi aba batyali mali banelungelo okanye bavumile ukuba bayalwamkela utyalo-mali ukuze babone ukuba ayizukuba bubulungisa na ngembuyekezo efunyanwa yiSeagal.
Ukukhululwa kongeza ukuba, ukongeza ekuvumeni okanye ekukhanyeleni iziphumo ze-SEC, uSeagal uvumile ukuhlawula i-157,000 yeedola kuphazamiseko, emele intlawulo yokwenyani yokwenyusa, kunye nomdla wangaphambili kunye nesohlwayo se- $ 157,000. U-Littman ukwathe oonondaba abayi kuba nefuthe kwezokhuseleko ngaphandle kokuchaza ngokufanelekileyo imbuyekezo yabo.
I-Seagal ikwagqibe kwelokuba akukho zikhuseleko ziya kukhuthazwa iminyaka emithathu.
Ekupheleni kokukhutshwa, i-SEC yongeze ukuba iOfisi yayo yoTyalomali kunye neOfisi yoKhuselo yalumkisa abatyali mali ngokuchasene nokuvunywa kosaziwayo kwaye yafuna lonke ithuba lotyalo mali ngokuzimeleyo.
Abanye abantu abadumileyo, kubandakanya inqaku lomdlalo wamanqindi uFloyd Mayweather, uDJ kunye nomvelisi wemveliso yomculo u-DJ Khaled, babekwa ityala "lokukhuthaza ngokungekho semthethweni" ii-ICO ngokusilela ukwenza intlawulo yoluntu ifunyanwe ukuxhasa utyalo-mali kwiminikelo yeengqekembe.
tags I-BitCoiin2Gen (B2G), Unikelo lwengqekembe yoqobo (ICO), Ikhomishini Yokhuseleko Notshintsho (SEC), USteven Seagal
I-AUDUSD ibuya isezantsi, ibambelele kwiinzuzo kufutshane kwinqanaba le-0.6600
Uhlalutyo lwamaxabiso e-AUDUSD-ngoFebruwari 27
Isibini se-AUDUSD senziwe imali kubuthathaka obukhulu be-USD, emva kokufikelela kwelona xabiso lisezantsi ngoLwesithathu ngaphezulu kweminyaka eli-10 kwinqanaba le-0.6540 ngelixa ubambelele kwiinzuzo zamva nje ngoLwesine, isibini seFX senyuka, senyuka nge-0.55% mihla le kwaye ngoku kwinqanaba le-0.6585 .
Amanqanaba okumelana: 0.7085, 0.6878, 0.6750
Amanqanaba enkxaso: 0.6540, 0.6479, 0.6000
I-AUDUSD iyatshintsha ngokujikeleza ishumi leminyaka, ukurhweba ngaphantsi kwemihla ngemihla elula ehamba phambili ye-5 kunye ne-13. Kwindlela yexesha elide, ukwehla kwe-AUDUSD ukusuka kwinqanaba le-0.7085 (ephezulu) kusaqhubeka. Le yinxalenye yethambeka elikhulu ukusuka kwi-1.1079 (ephezulu) kwinqanaba.
Ukwalelwa kwelayini ephezulu yokumelana ngokuthe tyaba kwinqanaba le-0.6750 kuqinisekisa uvakalelo lwexesha elide. Ujoliso olulandelayo linqanaba le-0.6008 (esezantsi). Utyekelo lungahlala lungamandla, ngelixa inqanaba lokumelana ne-0.7031 lihlala lingaguqukanga, kwanaxa kubuyiswa umva ngamandla.
I-AUDUSD ye-intraday bias ihlala kwicala eliphantsi okwangoku. Ukwehla ngoku kunokujolisa kwi-100% yokuqikelela ukusuka kwi-0.6938 ukuya kwi-0.6670 ukusuka kwi-0.6750 kumanqanaba e-0.6479 koku kulandelayo.
Kwelinye icala, ngaphezulu kwenqanaba le-0.6600, ukuxhathisa kwexesha elikufutshane kunokutshintsha ukungathathi cala kwe-intraday bias kwaye kwakhona kubangele ukudityaniswa ngaphambi kokuqala okunye ukwehla.
Ixabiso lokungena: 0.6540